Adeegyada Aasaasiga ee Sare | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Degmadeena waxay shaqaaleysiisaa aqoonyahan sare oo heer sare ah (AL) oo ku takhasusay dugsi kasta oo hoose. Isku-duwaha Waxbarashada Sare wuxuu hogaamiyaa baalasha iyo barnaamijyada baaritaanka madaxa-bannaan marka lagu daro wada-baridda iyo u adeegidda kheyraadka macallimiinta fasallada caadiga ah.
Tacliinta Sare waxay u fidisaa barnaamijyada iyo adeegyada soo socda ardayda dugsiga hoose iyo macalimiinta.
Barnaamijyada Kobcinta Waxbarshada Sare
Akhriska iyo Kobcinta Xisaabta
Xisaab Degdeg ah (Fasalka 4-5)
Hawlaha manhajka ka baxsan
Wings waxaa loogu talagalay inay siiso khibrado kala duwan ardayda hibada caqliga u leh ee fasalada 1-5. Kooxo yaryar oo arday ah oo la aqoonsaday ayaa kulmaya usbuucii hal mar. Manhajka isku dhafan wuxuu diiradda saarayaa hal-abuurka iyo fikirka halista ah iyo xirfadaha qarniga 21-aad. Baalasha sidoo kale waxay siisaa jawi nabdoon oo ay ardaydu ku dareemaan raaxo ay ku muujiyaan fikirkooda iyo fikradahooda.
Caqli Ahaan. Ardayda hibada leh ee leh IQ ku dhowaad laba heer oo ka sarreeya heerka caadiga ah.
Jiid-bax Kooxda yar ayaa ka baxeysa 60 daqiiqo, hal mar asbuucii.
Xogta qiimeynta jaango'an; macallinka iyo tallada waalidka. Qiyaasta miisaanka leh ayaa isku daraysa dhibco badan oo xog ah - CogAT, WISC-V, KBIT2 ama qiimeyn kale oo qibrad u leh (130+ ama 98% I) NWEA ama dhibcaha guusha MCA; Miisaanka qiimeynta waalidka iyo waalidka.
Minnetonka wuxuu sidoo kale siiyaa adeegyo kobcinta tacliinta arday kasta oo leh karti iyo / ama dano gaar ah. Xirfadleyda Barashada Sare, iyadoo ay kormeerayaan shaqaalaha AL, ayaa maamula qeybtaan barnaamijka. Ardaydu waxay kaqeyb galaan Baaritaanka Madaxa Banaan, oo ah barnaamij kobcin oo loogu talagalay inay ardayda siiso fursado ay ku baaraan aag gaar ah oo ay xiiseynayaan. Ardaydu waxay horumariyaan mashruuc waxayna la wadaagaan natiijooyinkooda.
Tacliin sare iyo / ama aqoon ahaan hibo u leh. Ardayda K-3 leh xirfadaha akhriska iyo qoraalka sare. Loo kaxeeyo barashada; xiisaha leh.
Fidinta xirfadaha akhristayaasha / qorayaasha horumarsan K-3. Sii akhristayaasha / qorayaasha horumarsan fursad ay ku baaraan mowduuc dan shakhsi ah. Ku dalbo xirfadaha luqadda ujeeddada dhabta ah ee dunida ee ah in dadka kale wax la baro.
Soo bixida iyo fasalka ku saleysan. Hal mar asbuucii; 45-60 daqiiqo 8 usbuuc - oo uu hogaaminayo xirfadlayaal tababaran. Marka xirfadaha cilmi-baarista la barto, macallimiinta fasalka waxay ku fidiyaan barashada maadada ku jirta habka baaritaanka.
Talada macalinka fasalka. Waxqabadka fasalka ayaa ah tilmaame aasaasi ah; qiimaynta la jaanqaaday ayaa door ka ciyaari kara.
Adeegyada kobcinta kooxda waxaa la siiyaa ardayda muujiya waxqabad sare oo xagga aqrinta iyo / ama xisaabta (oo ku saleysan Imtixaanada NWEA).
Tacliin sare. Si aad ah ugu hormarey xisaabta iyo / ama akhriska fasalada 1-5.
Sii caqabado dheeri ah ardayda aadka u horumarsan. Kala duwanaanta fasalka oo keliya ma xaqiijin karto koritaanka ardayda leh heerar aad u sarreeya ee guusha.
Jiid-bax 30-4 daqiiqo usbuucii - waxaa hogaaminaya macalin shati haysta.
Xogta qiimeynta jaango'an. Xisaab - Xogta NWEA taariikheed ee boqolkiiba 98-99. Akhrinta - Xogta NWEA taariikheed ee boqolkiiba 98-99 iyo / ama heerka akhriska ee horumarsan sida lagu qiyaaso marinnada siman.
Laga bilaabo fasalka afaraad, ardayda muujiya waxqabad sare ee xisaabta (oo ku saleysan Imtixaanada NWEA) waxay ku biiri karaan fasal xisaabeed la dedejiyay, kaasoo dhameystiraya manhajka xisaabta ee fasalka afaraad, shanaad iyo lixaad inta lagu jiro fasalka afaraad iyo shanaad.
Waxqabadyada manhajka ka baxsan waxaa ka mid ah Qaaradaha Xisaabta Qaaradaha, Saynisyahanno Da 'yar, Meel-ku-Taallo Goobaha Imtixaanka iyo Bandhigga Maskaxda. Liiska dhammeystiran ee waxqabadyada manhajka ka baxsan, booqo bogga Waxqabadyada .
Barnaamijka Navigator waxaa loogu talagalay ardayda hibada gaarka ah u leh fasalada 2-5. Waxay u adeegtaa koox yar, oo aad u gaar ah bartayaasha leh IQs of 140 iyo wixii ka sareeya.
Caqli ahaan hibo u leh. Ardayda hibada sare leh ee leh IQ ku dhowaad saddex leexasho jaangooyooyin ka sarreeya heerka caadiga ah.
Hubso koritaanka ugu habboon ee ilmaha hibada sare leh. Manhaj khaas ah iyo macalimiin si heer sare ah u tababaran waxay taageeraan horumarka aqooneed, tacliimeed, bulsho iyo shucuur ee ardayda sida gaarka ah wax u bartay.
Dejinta fasalka maalintii oo dhan. Naqshadeynta waxbariddu waa mid ay wax ku bartaan ardaygu isla markaana shakhsi ahaaneed Waxbarid koox yar, mashruucyo, weydiin iyo istiraatiijiyad waxbarid iskaashi ayaa caqabad ku noqda oo ku hawlan.
Xogta qiimeynta jaango'an iyo xogta waxqabadka. WISC-V Qiyaasta IQ (FSIQ) ama Tilmaamaha Awoodda Guud (GAI) ee 140 ama ka sarreeya; waxqabad xoogan oo ku saabsan jilitaanka Navigator iyo macluumaadka kale ee taageeraya sida loogu baahdo.
Buug-yaraha Waxbarashada Sare / Navigator